Himalaya Dainik » मोटी युवतीसँग विवाह गर्नुका अचम्मका फाईदै फाईदा !
सामान्यतया स्लिम केटीहरु आर्कषक हुने मान्यता रहँदै आएको छ । तर एक अनुसन्धानले यो कुरालाई गलत बताएको छ । अनुसन्धानमा के खुल्यो भने अधिकांश पुरुषहरु मोटी महिला मन पराउँछन् । यसका कारणहरु पनि धेरै रहेका छन जसमा सबैभन्दा पहिलो कारण मोटी केटीहरु श्रीमानलाई धेरै माया गर्छन र हरेक समयमा साथ दिन्छन् सजिलैं छाडेर जाँदैनन् ।
जो महिला मोटी छिन उनलाई मिठो खाना पकाउन आउँने झण्डै ९९ प्रतिशत सम्भावना हुन्छ । यसरी खानेकुरामा पनि उनले श्रीमानको मन जित्न सक्छिन । अन्य कामहरुमा केही अल्छी गर्ने भए पनि खानेकुरामा मोटा मानिसहरु अल्छी गर्न सक्दैनन् ।
मोटी महिलासँग सम्बन्धमा भएको केटा मा-नसिक रुपमा कहिल्लै तना-व नलिने प्रकृतिको हुन्छ । यर्सथ मोटी महिलाहरु श्रृंगार देखि लिएर अन्य विविध कुराहरुमा केटालाई दुःख दिने स्वभावका हुँदैनन् ।
एउटा सत्य के हो भने जो मानिस मा-नसिक रुपमा ठिक हुँदैन उ नै धेरै दुब्लो पातलो हुन्छ । मोटी महिलाहरु कुनै पनि कुरा मनमा राखेर षडयन्त्र गर्ने खालका हुँदैनन । उनीहरु मनमा भएको कुरालाई तत्काल भन्छन तर पछि सम्म राखेर बदला लिने स्वभावका हुँदैनन् । यसरी दाम्पत्य जीवन खुःशी र सफल हुन्छ उनिहरुले सन्तानलाई पनि यसरी नैं प्रेम गर्छन अनी परिवारलाई पनि ।
यी हुन् असल श्रीमानमा हुनुपर्ने ३२ गुण, तपाईंमा पनि छ की ?
बिरालोको म्याउँ मान्छेको भाषामा अनुवाद गरिदिने एप
निकिशा श्रेष्ठलाई दुर्व्यवहार गर्ने तीन जना नै पक्राउ
रहेनन् ३१ बर्षिय पत्रकार गोकर्ण गौतम
निकिशा श्रेष्ठमाथि ‘दुर्व्यवहार’ गरेको भिडिओ अपलोड गर्ने एक जना पक्राउ
यी ७ सुन्दर मुस्लिम महिलाः जो बुर्काबाट बाहिर निस्किएर चर्चित बने